The Best Fries Faransiis In France, Bilow Dibnaha oo faraha | Save A tareenka
Home > Tareenka Safarka Faransiiska > The Best Fries Faransiis In France, Bilow Dibnaha oo faraha
The Best Fries Faransiis In France, Bilow Dibnaha oo faraha
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo(Last Updated On: 24/04/2020)
Qofna ma run ahaantii waa ogyahay sheekada dhabta ah ee shiilan Faransiiska ee France. Waxaan xitaa ma noqon kartaa hubiyo in haddii ay ka yimaadaan France, at dhan. Sug, waa maxay?! Yeap, waxaad xaq u leedahay inaan taas maqlay – Belgiumka iyo Faransiis labadaba ayaa sheegtay in cuntada this, oo labadooduba way leeyihiin sheekooyinka in aad ka dhaadhiciyo.
Sida Qisada Belgian degaanka, tuulada masaakiinta ka Meuse Valley inta badan cunay kalluun yaryar ah la shiilay waxay ku qabteen webiga. Inta lagu jiro xilliga qaboobaha, webiga Xayiraadda lahaa, qaadashada kalluumaysiga wax aan macquul aheyn. sidaasaa, tuuladu lahaa si aad u hesho ilo kale oo cunto ah. Baradhada oo u muuqatay sida xal fiican. Sidaas daraaddeed waxay ku bilaabay oo tuban iyo waxa shiileyso si la mid ah ay ku sameeyeen kalluunka. Taasi waa sida shiilan horeysay Faransiis ah ayaa la dhigay. Waan ognahay waxa aad tahay qeybiso Bal haatan weyddii. Haddii sheekada tahay mid run ah, Maxaad ay u yeedheen Faransiis markaas? Sababtoo ah oo ka mid ah askartii Maraykanka. Oo ah kuwa ka qaatay dagaalkii aduunka aan ku Belgium dhadhamiyey, kuwaas oo baradho qoto-shiilay oo sida muuqata u jeclaa. Markaasay u yeedheen shiilan Faransiis, maxaa yeelay Belgiumka hadlay Faransiis. Sidee khayaali ah, xaq u?
U sheeg sheeko this to a maxaliga ah ee France, oo waxay ku qosli doonaa inaad at si adag aad dareemi doontaa raaxo. Waxay u badan tahay in xataa waxaad wici doonaa waalan. "The maqaayad cajiib Faransiis abuurtay shiilan Faransiiska ee France, dhamaadka sheekada. Waxay yihiin Faransiis, ha ka gubanayn, oo aadan weligaa ma dhihi waxay Belgian waa mar kale! Ever!"Taasi lahaa, badan, noqon wadahadalka.
Mid ka mid ah ama qaab kale, Waxaan jeclahay this qoto-saaxiib-gebi-qabin-laakiin-gabi-jannada-dhadhankiisu-fudud, wax dhib ah maleh haddii aan cunista baradhada shiilan Faransiiska ee France ama meelo kale. maanta, ay yihiin mid ka mid ah saxamada dhinaca ugu caansan dunida oo dhan. Waxay waxaa la siiyaa oo la lumo badan oo kala duwan, laakiin inta badan dadku doortaan Greega, majones, iyo khal. Oo annagu ma daryeesho haddii aad iyaga ugu yeedho Faransiis, Belgian ee kaliya chips, waa in aad u dhandhansiino ee France. Sidaas daraaddeed aynu aad u soo bandhigo si fiican u
Rimmer & macaan, Lyon: wajaheysa Naciimo
Ma waxaad tahay foodie a? Good! meeshan oo aad jecelaato! Rimmer & Zoet waa dukaan shiil yar qalbiga Vieux Lyon, mid ka mid ah ugu caansan waddooyinka ee Lyon. Waxaad ka heli kartaa shiilan ee koorta halkan. Waxaad sidoo kale heli doontaa Maraqa, ma ahan oo keliya in koorta a, halkii ay ku saxan yar oo caag ah. Waxa ka dhigaya shiilan si delicious waa in ay ka sii dhumuc weyn iyo double-shiilay yihiin. Sooo buni! Haddii aad weligaa joojin meeshan saaxiib by, ma nacasna ha noqon, si ay u iibsadaan koorta oo keliya hal iyo wadaagaan. Isla marka aad labada dhadhamin baradho, kuwaas oo, waxaad bilaabi doonaa dagaal u taliya! Erm ... waxaannu ognahay in ay leeyihiin.
Brussels ilaa Lyon waxaa qoray Train
London ilaa Lyon oo uu qoray Tareenka
Amsterdam ilaa Lyon Train times
George V Cafe, Paris: La kulmaan Paris si buuxda
Haddii aad ma ay Champs Elysee, waa sida aad ma ay Paris. Gaar ahaan haddii aad tababar safarka iyada oo Europe (laakiin taasi waa mawduuc kale). Anyway, George V Cafe waa meel fiican ku raaxaystaan ​​ambiance iyo shiilan fiican Faransiiska ee France. Marka la eego in ay meel, waa in aad la yaabin qiimo sare. Laakiin marka aad la Tagnana waan jawi PSG, aad arki doonaa in ay mudantahay dinaar kasta. Just dejiso halka aad raadinayso dadka gudbin by, iyo mudalabyada agagaarka ordaya. makhaayad waxay bixisaa cunnada caadiga Faransiis, oo shiilan yummy iman la shiidaa kasta oo.
Bordeaux inay Tareenadu Paris
New Bridge La Frite Faransiis, Paris: Hawlgalkeena A halis ah in Fries Faransiiska ee France
Dadka rumaysan shiilan Faransiiska ee France ma aha inuu xaq saxanka dhinaca a, laakiin hadhuudh ah oo ku habboon waa in meeshan fiiri. Oo qof kasta oo dhadhan shiilan ee Pont-Neuf La Frite Française noqon doontaa degdeg ah inay ku heshiiyaan. Ay u adeegaan ee suxuunta kartoonada huruud ah-oo-cad cute, shiilan Faransiis yihiin dabcan ugu weyn ee halkan. xitaa waxaad ka heli fargeeto a yar oo ka samaysan alwaax. dhex lumo badan oo kala duwan Dooro, laakiin talo waa maquufin guriga, ah "maquufin khad." shiilan The dhadhamin xataa si fiican haddii aad ku dar ham PSG in ay isku dhafka ah.
Cologne si Tareenadu Paris
de Clercq, Paris: Nooca Beljimka ee shiilan
Waxaad og waxay dhihi,: "Haddii aanad garanayn meesha ay u cunaan, tag restaurant in dadku ka buuxay. "Ka dib markii xukunka in, oo waxaannu ku dhamaatay De Clercq, dukaan in ayaa sheegay in ay iska iibiso shiilan Belgian. Haddii version reer Belgium waa dufan, callaaliska dusha, iyo jilicsan ee gudaha, waxaan oo dhan waa. Haddii aad jeceshahay wax kale ka sokow, kuwaas oo wajaheysa ulaha baradho, waxaan ku talinaynaa, xoogna, maxaa yeelay, waxay sidoo kale waa super delicious. Haddii kale, haddii aad rabto raso of shiilan, dalban pack a Rafaa oo Waa ku filan tahay afar qof.
Strasbourg si Tareenadu Paris
Frankfurt inay Tareenadu Paris
Le Relais De L'Entrecote, Paris: A Fries Faransiis toos ah In Experience France
Ma aan hore u soo sheegnay in jacaylka Faransiis inuu wax cuno shiilan la steak? No? Well, waxaa aad u tagto. Waxay sameeyaan. ay wax Waa. In Le Relais de l'Entrecote in ay saxan kaliya ee ugu muhiimsan ee aad ka dalban karto. dhab ah, ma jirto dabcan kale ugu weyn ee meeshan. Isla marka aad ku fadhiisan, kabal yeeriyad aad weydiineysaa sida aad jeceshahay in aad steak in la kariyey: dhif, dhexdhexaad ah ama si wanaagsan la sameeyey. Maxaa ka dhigay steak this gaar ah waa Maraqa kuwaas oo la karinayo ayaa qarsoodi ah muddo ka badan 50 sano. Iyo waxa ay ka dhigeysaa cuntada oo dhan gabi ahaanba Adkaadaha waa shiilan kaamil Faransiis dahabka ee France.
Provence in Tareenadu Paris
Chez Boris, Paris: Beeralayda Yaa dhig Cuntada Perfect
Raadinta meel kaamil ah in la cuno hilibka iyo shiilan Faransiiska ee France? mar dambe la odhan. Waxaan helay makhaayad this. Tayada hilib ah waa heer kale. shiilan Faransiis yihiin cut gacanta iyo shiilay ee baruurta hilibka lo'da, taas oo inta badan adkaha ka badan waxaa codadka. Mulkiilayaasha makhaayad yihiin beeralayda, si ay u ogaadaan si aad u wanaagsan waxa aad cunaya. Cabashada kaliya ee uu noqon doono qiimaha waayo, iyagu waa yara ... sare. Laakiin marka aad dhadhamin cuntada ee Chez Boris, baad u odhan kartaa hal wax oo kaliya: "Lacagtaydii Qaado, oo halkan - dheeraad ah in qaar wado!"
Tilmaam: aad u qabsan kartaa a London si tareen Paris hadda oo aad Chez Boris si degdeg ah ka badan aad u malaynayso!
shiilan Faransiis ayaa noqotay dawayn meel kasta oo adduunka ah. Qof walba waxaa loo diyaarinayo iyo iyaga u adeegaya ay cunto uu jecel yahay. weli, waxa aanu kugula talinaynaa in aad iyaga u cuni ay soo hindiseen. Waxaan sidoo kale waxay aaminsan yihiin in dalkooda waa France, ma Belgium. Oo, sida aad ka arki kari waayay, shiilan Faransiis weyn ee France waxaa laga heli karaa ku dhawaad ​​rukun kasta wax Faransiis. Waxaad iyaga u cuni karaan, sida saxan dhinaca a, ama sida koorsada ugu weyn. Sidaas, ha sugin labaad dheer!
Nagu soo booqo Save-A-tareenka si ay u iibsadaan aad tigidh si France, iyo isku diyaarin ah shiilan Faransiis ee ugu faraxsan yahay France!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit ah la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-french-fries-france%2F - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml oo waxaad bedeli kartaa / ja si / es ama / TR iyo luuqado badan.
#friesfries #shiilan Cuntada cunnada travelfrance